EACHINLED, natsangana tamin'ny 2006, dia manolo-tena ho mpamatsy vola manerantany sy hajaina ho an'ny vokatra sy serivisy audio visual, hetsika efijery lehibe ary fampahalalam-baovao dokambarotra. EACHINLED dia orinasa teknolojia avo lenta nasionaly, misy ny fampiroboroboana ny fampisehoana LED fanofana an-trano, efijery LED fanofana any ivelany, takelaka LED ao anaty trano, takelaka fanaovana doka LED ivelany ary rindrina horonantsary HD pixel LED, sns
Hatreto dia olona maherin'ny 300 no miasa ao amin'ny foiben'ny orinasa, ary orinasa 4 mahery no atsangana ao an-trano. Ny tambajotra serivisy sy varotra aorinan'ny varotra dia miorina manerantany izay hanome ny mpanjifa vahaolana, fiofanana teknolojia ary fanampiana manokana.
EACHINLED dia mitana ny laharam-pahamehana amin'ny orinasany lehibe amin'ny famokarana efijery LED, izay afaka manome efijery LED an-trano sy ivelan'ny trano ary manofa trano miaraka amin'ny pixel manomboka amin'ny P1.6-P31.25. Izy ireo dia ampiharina betsaka amin'ny hetsika fampakaram-bady, hetsika fiaraha-miasa, gala, fety, kaonseritra, fampisehoana, hetsika ara-panatanjahantena, fihaonambe, fampisehoana moto, haino aman-jery dokambarotra ary fandrindrana hetsika sns.
EACHINLED dia tsy hitsitsy ezaka amin'ny fanamafisana ny toerany amin'ny maha vokatra, haitao ary tsena azy. Ny EACHINLED dia mandray anjara mandrakariva amin'ny ezaka ataontsika hanampiana ny mpanjifantsika hanatsara ny fahitana sary ary hanatanteraka ireo andraikitra ara-tsosialy.